कृषि विकास बैंकको ५० प्रतिशत हकप्रद खुला, कहाँबाट दिने आबेदन ? « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
कृषि विकास बैंकको ५० प्रतिशत हकप्रद खुला, कहाँबाट दिने आबेदन ?
काठमाडौँ ३ कातिक । कृषि बिकास बैंक लिमिटेडको ५० प्रतिशत हकप्रद आजदेखि बिक्रि खुला भएको छ। ५० प्रतिशत हकप्रद शेयरका लागि असोज ९ सम्म कायम शेयरधनीहरुले कात्तिक आजदेखि मङ्सिर ७ सम्म आबेदन दिन सक्ने छन।
प्रकाशित : ३ कार्तिक २०७३, बुधबार ०६:०२